Global Voices teny Malagasy » Asehon’ny Tatitra Ny Fomba Ampiasain’Ireo Politisiana Ao Ghana Ny Media Sosialy Mialoha ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Oktobra 2016 20:41 GMT 1	 · Mpanoratra Ndesanjo Macha Nandika Liva Andriamanantena
Namoaka tatitra momba ny andiany faharoa amin'ny Tondro Fitantanana ny Media Sosialy (GSMI)  ny Penplusbytes , izay manombana ao amin'ny media sosialy sy mandahatra ny fidirana an-tsehatry ny antoko politika, ny mpitarika ny antoko politika ary ny sampa-draharaha fitantanana ny fifidianana manan-danja ao Ghana izay mifototra amin'ny mpanjohy azy ireo sy ny tahan'ny fitoloran-tena ao amin'ny Facebook sy Twitter.
Nibaribary ny fibahanan-tsehatra ara-politika tao amin'ny media sosialy, na dia talohan'ny tatitry ny Penplusbytes aza. Efa nanombatombana ny Inspektera Jeneralin'ny Polisy ao Ghana John Kudalor tamin'ny May 2016 fa mety hihevitra ny fanakatonana ny sehatry ny media sosialy  mandritra ny fifidianana amin'ny 7 Desambra hitandroana ny “filaminana” ireo manampahefana Ghaneana.
Nanambara  ny Filoha Ghaneana John Dramani Mahama taorian'ny adihevitra nifanaovany teo amin'ireo mpandray anjara lehibe sy taorian'ny fanambarany tamin'ny 14 Aogositra fa “tsy mieritreritra ny hanakatona ny media sosialy amin'ny androm-pifidianana ny governemanta.”
Fikambanana tsy mitady tombontsoa ny Penplusbytes  izay mandrisika ny fitantanana mahomby amin'ny alàlan'ny fampiasana ny teknolojia eto Afrika. Kinendrin'ny ny fikambanana ny hitondrana fiovana amin'ny alalan'ny fanavaozana ao amin'ny sehatra telo manan-danja: ny fampiasana ireo teknolojia nomerika vaovao mba hanatanterahana ny fahaiza-mitantana sy ny tamberin'andraikitra, ny media vaovao sy ny fanavaozana, ary ny fanaraha-maso ny andraikitra ho an'ny fampiasana mahomby ny harena ankibon'ny tany, ny vola miditra sy ny loharanon-karena azo avy amin'ny solika sy ny etona .
Fantarin'ny GVM (Tondro Fitantanana Ny Media Sosialy) ny maha zava-dehibe sy ny fahombiazan'ny fampiasana ny media sosialy eo amin'ny fitantanana. Navoaka tamin'ny Jona 2016 ny tatitra  momba ny tondro voalohany  .
Tany am-piandohan'ity taona ity ny Penblusbytes no namoaka ny tatitra voalohany momba ny Tondro (fampilaharana) Media Sosialy (SMI)  [mg] misahana ny pirinty, ny onjampeo ary ny fahitalavitra ao Ghana.
Trohy eto  ny Tondro Fitantanana ny Media Sosialy feno .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/31/90917/
 tatitra momba ny andiany faharoa amin'ny Tondro Fitantanana ny Media Sosialy (GSMI): http://penplusbytes.org/site/index.php/publications/governance-social-media-index-report-2016/
 fanakatonana ny sehatry ny media sosialy: https://globalvoices.org/2016/05/29/ghanaians-oppose-shutdown-of-social-media-platforms-during-elections/
 namoaka ny tatitra voalohany momba ny Tondro (fampilaharana) Media Sosialy (SMI): https://mg.globalvoices.org/2016/03/05/79961/